प्रेम बिहे गरेको ९ वर्ष पछि ९ महिनाको छोरो छोडेर श्रीमति अर्कैसंग भागेपछि…. छोराछोरीको भयो यस्तो बिचल्ली
Home/ समाचार/प्रेम बिहे गरेको ९ वर्ष पछि ९ महिनाको छोरो छोडेर श्रीमति अर्कैसंग भागेपछि…. छोराछोरीको भयो यस्तो बिचल्ली
प्रल्हाद चन्द्र घिमिरे । अर्घखाँचीको छत्रदेवका उमलाल पाण्डे पोखरामा साइकलमा मकै बेच्ने काम गर्दै आएका छन् । विगत २ महिना देखि उनी मकै बेच्दै पोखराको सडक किनारमा हिँडिरहेका हुन्छन् । विशेष गरि उनी दैनिक जसो पोखराको लेकसाइड तिर जाने गर्छन् ।
९ वर्ष पहिले उमलालको बिहे भएको रहेछ । फोनबाट भेट भएर उनीहरुले प्रेम विबहा गरेका रहेछन् । ९ वर्षको अन्तरालमा उनिहरुका २ सन्तान भए । छोरी ४ वर्षकी छन् भने छोरा मात्र ९ महिनाका भएका छन् । ९ वर्षसम्म उमलालले काठ्माण्डौबाट कपडा खरिद गरेर गाउँगाउँ लगेर बेच्ने काम गर्थे तर पछिल्लो समय मकै बेच्नुमा पनि उनको बाध्यता छ । धेरै नाफा नहुने भएपनि उनि छोरीको लागि पोखरामा नै दिउसो १ बजेपछि मकै बेच्न निस्कन्छन् ।
उनले आफ्नी श्रीमती अर्कैसंग लागेको र कृष्णनगरबाट प्रहरीले पक्राउन गरेर ल्याएपछि कानुनी रुपमा छम्बन्ध विच्छेद गरेको बताएका छन् । उनले सम्बन्ध विच्छेद पछि पनि पुर्व पत्नीले आफुलाई मार्ने धम्की दिएको आरोप लगाएका छन् । कुराकानीकै क्रममा आफुले मलाई यी सबै कुरा भन्नुको अर्थ पनि खोले । सर मलाई अरु केहि चाहीएको छैन । मेरा छोराछोरीलाई कुनै संस्थामा लगेर राम्रो शिक्षा दिन पाए म पनि खुलेर व्यापार गर्न पाउथे ।
उनले भने – “सानी छोरीलाई घरमा एक्लै छोडेर आउदा मकै पोलीरहेको भएपनि मन त कहाँ यहा हुन्छ र के गरी कसो गरि भन्ने लाग्छ नी सर ।” उनले आफ्ना कुरा राखीसकेपछि कसैले संस्थामा मेरा बालबालीका राखिदिनपनि अनुरोध गरे । पछिल्लो समय सामाजीक सञ्जालबाट भैरहेको विक्रितिको यो एउटा उदाहरण हो । यसले हाम्रो समाज कता गईरहेको छ भन्ने प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौं –स्वयम्भुमा कारभित्र रगत बगिरहेको अवस्थामा शव
यी हन् धादिङ बस दुर्घटनाका बाच्न सफल १५ (नामावलीसहित)
दुखद खबर : राजपा नेता महन्त ठाकुर आइसियु मा राखियो
सुनसरी बाट दुखद खबर …पूरा हेरि सक्दो शेयर गरौ
मोरङ को जंगलमा महिलाको शव भेटियो ( साथमा हत्या गरेको यस्तो प्रमाण पनि भेटियो )